नेपालमै छन् व्यवसायिक कल गर्ल : ५ हजार रूपैंयामा खाना, खाजा र दुई बोतल वियर साथमा सेक्स पार्टनर::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
नेपालमै छन् व्यवसायिक कल गर्ल : ५ हजार रूपैंयामा खाना, खाजा र दुई बोतल वियर साथमा सेक्स पार्टनर
काठमाडौँ- रवि कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एउटा फ्ल्याटमा पुगे । खानाका परिकारदेखि मदिरासम्मको राम्रो व्यवस्था भएको फ्ल्याटमा दुईजना युवती थिए ।
धनगडीबाट काठमाडौं आएका बेला काम सकेर मस्ती मुडमा रहेका रविले एक हप्तासम्म प्रयोग गरेको ट्याक्सीमार्फत त्यो फ्ल्याटको ढोका ढकढकाउने अवसर पाए । उनको डिल भयो– ५ हजार रूपैंया, ८ घन्टाको समय । खाना, खाजा र दुई बोतल वियर पनि । साथमा सेक्स पार्टनर पनि ।
केही समय लन्डन समेत बसेका उनले नेपालमा सस्तो र राम्रो सुविधा पाएको महसुस गरें । उनी भन्छन्,‘लन्डनमा त व्यावसायीक रूपमा नै यस्ता ठेगाना पाइन्छन्, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा पनि सुरु भएको रहेछ ।’ रविले हरेक पटकको काठमाडौं बसाईलाई सुखमय बनाउने सजिलो माध्यम पनि भेटेका छन् ।
रविमात्र होइन जीवन बुढाथोकी (नाम परिवर्तन)लाई जतिबेला सेक्सको आनन्द लिने मन हुन्छ इन्टरनेट साइट खोतल्न थाल्छन् । कल गर्ल सम्बन्धी व्यावसायीक साइटमा रहेका ठेगानाका नम्बर र युवतीसँग सम्पर्क गर्छन् । केही समयमा नै डिलअनुसारको सेवा लिने गरेका छन् ।
रेडलाइट एरिया नभए पनि नेपालका विभिन्न सहरमा कल गर्लको संख्या भुसमा आगो सल्किए जसरी बढेको छ । खासगरी विद्यार्थी, रोजगारी गरिरहेका युवतीहरूले छिटो आम्दानीका लागि कर्ल गर्लको पेशालाई अपनाउन थालेका छन् । यसको यकिन तथ्यांकन नभए पनि विभिन्न सहरमा युवतीहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।
कर्लगर्ल सम्बन्धी कतिपय विदेशी वेभसाइटहरूले त नाम, सहर, ठेगाना र फोन नम्बरसहित युवतीको तस्बिर नै राखिदिएको छ । कर्लगर्ल सम्बन्धी जानकारी राख्ने ‘डेटिङफेला’भन्ने वेभसाइटले नेपाली युवतीहरूको नामसहित विस्तृत विवरण राखिदिएको छ । यो साइटले यस्ता युवतीको वायोडाटा नै राखिदिने गरेको छ ।
कतिपय कल गर्ल आफ्ना ग्राहकको मर्जीअनुसार विभिन्न ठाउँमा ‘लङ ड्राइभ’मा समेत जाने गरेका छन् । इन्टरनेट एउटा माध्यम भयो, अर्को क्लव, डान्स रेष्टुरेन्ट र कतिपय डिस्कोमा भेट हुने गरेको बताइन्छ ।
कल गर्ल भनेको बाटोमा हिँड्ने ‘सेक्स वर्कर’ हुन् । उनीहरूले आफ्नो पेशा र व्यावसायलाई आम मानिसलाई प्रस्टसँग खुलाएका हुँदैनन् । उनीहरू कुनै एजेन्सीसँग आवद्ध हुने गरेका छन् ।
कल गर्लले म्यागेजिन र इन्टरनेटमा आफ्नो विज्ञापन पनि गरेका हुन्छन् । उनीहरूको विज्ञापनलाई एजेन्सीहरूले प्रमोशन गरेका हुन्छन् । कतिपय पोर्नस्टारले पनि कल गर्लका रूपमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । कतिपय कलगर्लका आफ्ना वेभसाइट पनि हुने गरेका छन् ।
नेपालमा भने ट्याक्सी, बार, क्लवलगायतका ठाउँको सम्पर्कका आधारमा कल गर्लले व्यावसाय गर्दै आएका छन् । कानुनले बर्जित गरेका कारणले वेभसाइट, विज्ञापनलगायत हुने गरेको छैन ।
नेपाल आएका सोनु निगम नर्भिक अस्पताल भर्ना
गोविन्द र बसन्ताको स्वरमा ‘परदेशी हुँदा…’ भिडियोसहित सार्बजनिक
राणा र राजाभन्दा पनि क्रूर कम्युनिस्ट सरकारप्रति कालकारको व्यंग्य : ‘लुट्न सके लुट, धेरै बोले कारबाही हुन्छ चुप लागेर सुत’
नेतालाई प्रमोदको चेतावनी : गीतमाथि राजनीति नगर्नुहोस्
‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ जस्ताको त्यस्तै युट्युबमा राख्न आकस्मिक निर्णय
देश लुट्न लागेका कम्युनिस्टको निद हराम ! गीतले सर्वत्र खैलाबैला